Faribolana Sandratra : « Mitsena masoandro » ny poeta | NewsMada
Faribolana Sandratra : « Mitsena masoandro » ny poeta
… Fa tsy voatery hametsovetso ny zava-tsy mety ao anaty fiarahamonina fotsiny ! Ao amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM Tohatohabaton’Antaninarenina) ny 23 janoary izao, hanatontosa ny antsa tononkalo « Mitsena masoandro » ry zareo ao amin’ny Faribolana Sandratra. Fijery miabo, haneho ny mahafinaritra, fanantenana, hatsaran-tarehy, hatsaram-panahy, sns, ny mpiantsa tsirairay.
Nohamafisin’ireo poeta ireo fa tsy mpitanisa volana aman-kintana fotsiny araka ny niheveran’ny sasany azy ny mpanoratra tononkalo fa miaina ny fiainan’ny fiarahamonina ihany koa. Mitaky fiaraha-miaina mendrika ny maha olona (saina, vatana ary fanahy). Maneho ny fisian’ny fanantenana ho an’ny olona tsirairay.
Marihina fa mivoaka mandritra io antsa tononkalo io ihany koa ny boky « Mitsena masoandro ». Ankoatra ny maha kanto renesin’ny sofina azy, nampifoha talentan’olona maro ny antsa tononkalo tahaka izao fanaon’ny Faribolana Sandratra izao. Manampy ny mpianatra ihany koa. Maimaimpoana rahateo ny fanatrehana ny antsa.